Mandray anjara amin'ny lalao baolina kitra - Miomàna miaraka amin'i Dominic Esposito
Mandray anjara amin'ny lalao baolina kitra - Miomana amin'ny DI
Miomàna ho amin'ny fifaninanana baoritra miaraka amin'ny DI DI ankehitriny !. Sary nalaina tamin'ny The Drill Instructor
Vonona ny hilalao amin'ny fifaninana amin'ny pool na tsia? Mampahafantatra lesona momba ny dobo mahavariana amin'ity volana ity avy amin'ny The Drill Instructor . Ny DI dia mameno toeram-pisakafoanana any amin'ny toeram-pitsaboana rehetra, ho an'ny toeram-pitsaboana, fampiratiana ary vondrona ary lesona tsirairay. Tena atolotr'ilay hetsika manaraka momba ny dobo na ny fotoana manaraka tokony hapetraka miaraka amin'ny mpampianatra mahay ianao, ary alaivo ity dobo filaminana ity hikoropaka, manokana! - Mat, Ny Pool & Boky Torolalana
Mahazo Tsara ny Tsara ny Tsara
Te-ho tsara kokoa amin'ny pila billet ve ianao? Mitaky lucky izany . Mamaky izany zo izany ianao, kanefa, manahy mafy anao aho ary midika izany zavatra izany amin'ny teny. Angamba rehefa mieritreritra vintana ianao, ny eritreritra mahatsara ny zava-nitranga, izay tsy azonao an-tsaina akory ny zava-nitranga, dia tonga ao an-tsaina. Miala tsiny, fa tsy izay lazaiko.
Hello, mpiara-belona mpiara-dia:
Ny anarako dia Dominic Esposito, aka The Drill Instructor. Ny sakaizako Matt Sherman, ny Pool's & Billiards Guide About.com, dia nanasa ahy hiditra eo amin'ny tarehinao ary hanolotra anao ny zavatra hafa tonga hijery ny torolalan'ny dobo tsara indrindra amin'ity volana amin'ny volana ity. Miombon-kevitra amin'izy ireo aho! Manomboka izao ary mandrapahatongan'ny fampahafantarana hafa, dia hanana fahafahana hividy an'ireny lesona ireny ianao ary raha mifanaraka amin'izay lazaiko aminao aho, ao anatin'ny fotoana fohy, dia ho lasa mpampihorohoro ratsy indrindra ianao eo amin'ny latabatry ny dobo.
Eny ary, andao hanomboka amin'ny fototra vitsivitsy. Nahazo fandresena iray farafahakeliny ve ianao tamin'ny herintaona? Efa nilalao tamin'ny fifaninanana ve ianao tamin'ny herintaona? Makà taratasy misy soratra ary soraty hoe: "Hahazo ny lalao iray farafahakeliny aho amin'ny herintaona." Raha ilaina dia soraty ihany koa hoe: "Ny tanjoko voalohany dia ny milalao amin'ny fifaninanana amin'ny taona manaraka."
Andeha isika. Bola iray na roa farafahakeliny farafaharatsiny (isaky ny mihazakazaka) raha oharina amin'ny tamin'ity taona lasa ity? Raha tsia, te-ho lasa baolina iray na roa tsara kokoa ve ianao amin'ity taona ity? Dia mila manoratra izany ianao. Raha mikasa ny hanao zavatra iray izay vao avy niresaka momba anao aho dia mila manao drafitra voasoratra aloha ary manomboka. Raha manomboka manomboka mampiasa vola ao aminao aho, dia manantena aho fa tsy hanao tsinontsinona ianao. Raha tsy izany, tsy afaka misambotra dobo miaraka amin'i LUCK ianao raha mampianatra anao koa.
Mandehana any amin'ny pejy manaraka mba hamita ilay fantsona na hamaky bebe kokoa momba ny DI DI eo amin'ny fianarana ny baolina kitra 10 sy ny mpampianatra
Tsy misy lozam-pifamoivoizana rehefa mampiasa LUCK ianao
Ataovy ireo tifitra efatra ireo, ary lavitra loatra ny fifaninanana amin'ny fifaninana amin'ny dobo. Sary nalaina tamin'ny The Drill Instructor
Andeha hojerentsika, avy any ambony. Ny LUCK dia fanafohezana ny L abor U nder C orrect K amin'izao fotoana izao .
Izay indrindra no azoko anampiana anao amin'ity torolàlana momba ny Profesionera ity . Ny toerana tsara indrindra hanombohana dia ny fanaraha-maso ny lalana sangan'asan'ny baolina kendreny sy ny fifehezana haingana. Mametraka ny baolina eo amin'ny làlamby araka ny aseho amin'ny Diagram 1. Aorian'ny poketrakao ny baolina ao am-paosiny, dia ampiasao ny dian-tongotra samihafa araka izay voafaritra mba hahatongavan'ny baolina baolina amin'ny teboka A, B, C ary D.
Eo amin'ny voalohany dia mametraha, mametraka, mametraka ny baolina amin'ny totozy ao anaty kirihitra. Aorian'io dia asio baolina 1 ny "baolina kitra", ary avy eo dia asaivo manomboka amin'ny 2 "tanteraka ny tifitra. Fanandramana hanaovana ny baolina baolina any amin'ny A hatramin'ny D D farafahakeliny in-7 in-10 isaky ny toerana.
Mariho hoe ahoana no ahafahan'ilay fehezan-dalan'ny baolina baikon'ny baolina kitra ny fepetra voatery hanao ny baolina baolina any amin'ny teboka farany. Amin'ny maha-bonus anao dia misy fiantraikany amin'ny fahaizanao mifehy ny haingam-pandeha.
Eny tokoa, ary afaka mampiasa ny napkin sy ny diary iray ianao mba hahazoana izany amin'ny alalan'ny tsara. Ny diary dia mitazona ny fanamarihanao momba ny zava-bita momba ny asa fanaovam-baolina fanampiny izay tokony mila miasa amin'ny ho avy. Ny napkin dia mametraka lasibatra tsara mba handrobohana ny baolina misokatra ho an'ny fanombanana. Azonao atao koa ny mampiasa azy io mba hanadiovana ireo baolina ary hametraka ny napkin ao anaty kitapo fanodinana taratasy rehefa vita. Miorina eo amin'ny fahaizanao manana fahaizana, azonao atao ny manamboatra napkins iray efa napetraka mba hahatonga ilay biller henjana, fa ireo mpilatsaka an-tsitrapo dia manantena ny hahatratra taratra iray lehibe toy ny tapa-taratasy misy taratasy taratasy miaraka amin'ny baolina baolina. Ary ny tandroka dia miezaka ny manakana ny baolina baikony amin'ny tontolon'ny habaka amerikana ! - Mat
Amin'ny hoavy, raha misy olona milaza hoe: "Rahalahy, [na Rahavavy] no nitifiranao ireo jiro iny alina iny," dia valio hoe: "Misaotra! LASA madio fotsiny" Matoa aho ary fantatro ny tianao holazaina, ary ny ampahany tsara indrindra amin'ny fahalalanao Tsy mila milaza azy ireo fotsiny fa mandoa vola fotsiny ary maka ny toeram-pivarotana.
Avadiho ny pejy mba hahitana ny soso-kevitra amin'ny famoahana ireo tifitra efatra tonga lafatra - avy amin'ny fampianaran'ny The Drill Instructor.
Andininy anglisy - Ataovy ny efatra tifitra
Manoritsoritra ny fomba 1-2-3 amin'ny fanondroan-teny anglisy. Sary nalaina tamin'ny The Drill Instructor
Ity fampisehoana baolina kitra ity dia mampiseho ny "rafitra 1-2-3" ho fampiharana ny teny anglisy amin'ny baolina kibay. Ireo hevitra efatra nomena (anisan'izany ny baolina afovoany tsy misy fanoratana na tsipika) dia soso-kevitra efatra mba hamitana ny fizotry ny ABCD eo amin'ny pejy teo aloha.
Misy andrana maro hafa tahaka ity iray ity ao amin'ny andian-dahatsarim-bokin'ny DVD sy DVD. Alefaso azafady amin'ny tranokala vaovao Drill Instructor aho ary jereo ireo. Ankoatra izany, azafady ny Facebook-nao sy ny dokam-barotra viralalinao ary lazao ny namanao mpiara-pisotro rehetra hanamarina ity lesona ity ary hamela anay hahalala raha toa ka te ho avy tsy ho ela ianao.
Mpihazakazaka fahaiza-manao 2: Famaranana ny làlan-dalamby lava
Mpandroba fahaizana 4: The Double Kick System
Mpandroba fahaizana 5: Fanafody fiarovana amin'ny 8- sy 9-Balls
Mpandrindra fahaiza-manao Fahaizana OO7: Mitsambikina am-pilaminana , Mr. Bond
Mpandroba fahaizana 8: Fomba efatra ho an'ny baolina baolina
Mpifaninana Skill 10: Mandehana
Mpihira fahaiza-manao 12
Mpandroba fahaizana 14: "Time chalking" - Fametrahana fitiliana fitiliana
Mpihira fahaiza-manao 15: Sample 8-Ball Pattern
Fanamarihana avy amin'ny Workout DI - fifandirana mafonja sy mozika
Lesona sy Soso-kevitra
Tsidiho ny tranokalan'i The Drill Instructor
Ny Fomba Fampiofanana ny Bodybuilding mba Hanorenana Routine Quadriceps
Fiatoana Skateboarding: Goofy-Foot
A-Wedge: Club Golf an'ny anarana maro
Hazavao ny tavy (na voapoizina) amin'ny gile
Torohevitra momba ny fandresena ny adihevitra momba ny evolisiona
Dingana ahodinan'ny ala
Tokony hampiasa AD na CE ve isika?
Ny momba ny fananganana seminera vita amin'ny hazo
Ny Fandringanana an'i Jerosalema nohamarinin'ny fahalavon'i Ashkelon
Society of Irishmen
Ilay Notorious Benedict Arnold avy amin'i Steve Sheinkin
Fomba tsotra mba hisorohana ny kodiaranao
Nahoana ianao no mila mianatra any an-tsekoly?
Ireo hira ABC dia mihira eo
Ny Gurus 10 an'ny Tantara Sikh
Ahoana ny famakiana sakafo frantsay?
Fiaramanidina faran'izay ambany indrindra amin'ny gara Lehilahy Lehibe: Ny Besinimaro
Hemlock Wooly Adelgid - Famantarana sy fanaraha-maso
Fanalana zaza sy fivavahana
Ady lehibe faharoa: Battle of Eniwetok